MA-6000 Real Time PCR စနစ်
Pseudorabies ဗိုင်းရပ်စ် (gB) PCR ထောက်လှမ်းရေးကိရိယာ
E.coli O157: H7 PCR ထောက်လှမ်းကိရိယာ
ပိုးမွှား AEROSOL နမူနာ
CHK-16A အလိုအလျောက် Nucleic Acid ထုတ်ယူမှုစနစ်
နှစ်ပေါင်းများစွာ PCR ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်မြှင့်တင်ရေးကို အခြေခံ၍ Molarray သည်ဆန်းသစ်သောဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များကိုအကောင်းဆုံးနှင့်အတူပေါင်းစပ်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီထုတ်လွှတ်ထားသောအရေအတွက် PCR စနစ် MA-6000 ကိုစတင်ခဲ့သည်။
၁.၂၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်အပူအအေးပေးစနစ်၏အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုဇုန် ၆ ခုကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးတီထွင်ခဲ့သည်။
၂။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်၎င်းသည် optical fiber ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းအားဖြင့်အလင်းအရင်းအမြစ်နှင့်ထုတ်လွှတ်မှုအရင်းအမြစ်ကိုဖန်တီးရန်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
၃။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်သီးခြားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုရှိသောအရေအတွက်ချောင်းကြည့်နိုင်သောလမ်းကြောင်းခြောက်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
4. ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပေးသောထပ်တူပြုသည့်အပူချိန် module ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
၅။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Windows ၏ workstation နှင့် mainframe တို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီးဖန်တီးခဲ့သည်။
၆။ ၂၀၁၂ တွင်၊
၇။ ၂၀၁၅ တွင်အပူပေးမော်လီကျူး၏အပူစူပါစွမ်းဆောင်ရည်နည်းပညာကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
သင်၏နောက်ဆုံးနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော qPCR စက်အတွက်ရွေးချယ်မှု
——— MA -6000 အချိန်မှန် PCR စနစ်
အပူချိန် module ၏ 2.Thermal လျော်ကြေးငွေနည်းပညာ
အအေးခံအနေအထားတွင်အပူချိန်နိမ့်သော CCD 0.15s ကိုမြန်ဆန်စွာရယူခြင်း
၁.၅ ဆထိရောက်သောခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောအရေအတွက်မြင့်မားသော sensitivity
7.Flexfoie, ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူ - လွယ်ကူသော software ကိုပလက်ဖောင်း
9.Gold team၊ ရင်းနှီးသောဝန်ဆောင်မှုဂျက်လေယာဉ်။ မင်းရဲ့စမ်းသပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်စိတ်မပူပါဘူး
4..Meat ထုတ်ကုန် adulterated
လွတ်လပ်သောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ (၆) ခုပေါ် အခြေခံ၍၊ အပူစွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုစွမ်းအားကို အသုံးပြု၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးအပူစွမ်းအင်ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သောကြိမ်နှုန်းစနစ်ဗို့အားဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအပူအပူလွှဲပြောင်းစွမ်းရည်ကို အသုံးပြု၍ module အပူပေးမှုနှုန်းကိုသေချာစေသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အငွေ့ပျံခြင်းအပူချိန်တို့သည်သင်လိုအပ်သောအပူချိန်ညီမျှမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်သင်၏အဖိုးတန်သောအချိန်ကိုသက်သာစေရုံသာမကပြီးပြည့်စုံသောရလဒ်၏ပြန်လည်ရနိုင်မှု၊ မည်သို့သောစမ်းသပ်မှုပုံစံ၊ မည်သို့ပင်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောဒေတာတူညီမှုနှင့်ထပ်တူပြုခြင်းကိုရရှိနိုင်သည်။
ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော optical detect လုပ်ခြင်းနည်းပညာနှင့်အားသာချက်များ
ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော optical ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းနည်းပညာ၏ကိုယ်စား၊ တုံ့ပြန်မှုစနစ်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစေသောအလင်းအရင်းအမြစ်ပြီးနောက်၊ အလင်းပြန်ခြင်းနှင့်ဓါတ်ပြုခြင်းပြီးနောက်တုံ့ပြန်မှုစနစ်မှအလင်းထုတ်လွှတ်မှု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတုံ့ပြန်မှုတွင်းများနှင့်အအေးဒါဏ်တစ်ခုစီမှစွမ်းအင်လျော့နည်းသွားခြင်းတို့ဖြင့် optical fiber ကိုအသုံးပြုပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏တသမတ်တည်းနှင့်စစ်မှန်မှုသေချာစေရန်နှင့်ထောက်လှမ်း sensitivity ကိုအလွန်တိုးတက်စေခြင်းငှါ, ဂုဏ်သတ္တိများသင့်ရဲ့အနိမ့်ထိရောက်သောထောက်လှမ်းစေခြင်းနှင့်အလွယ်တကူခွဲခြားကူးယူနိုင်ပါတယ်နမူနာ။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းမတိုက်ဆိုင် function ကိုပရိုတိန်းအဆင့်အထိ qPCR ၏လျှောက်လွှာလယ်ကိုတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်ထားပါသည် ရောဂါရှာဖွေရေးဓါတ်ကူပစ္စည်းများ၏မျိုးစုံစနစ်များ၏ဆောက်လုပ်ရေးများအတွက်နည်းလမ်းသစ်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အလိုအလျောက်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာရလဒ်များတွက်ချက်ခြင်း၊ စံသတ်မှတ်ထားသောကွေးကိုအလိုအလျောက်တည်ဆောက်ခြင်း၊ အကြွင်းမဲ့ / ဆွေမျိုးအရေအတွက်၊ မျိုးစုံအရေအတွက်၊ ပေါင်းစပ်ကွေးခြင်း၊ မျိုးဗီဇဗီဇပြောင်းလဲခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ကွေး (optional ကိုပွဲစဉ်), etc
Tube စွမ်းရည် ငါ 96x0.2m ငါ
ကုန်ပစ္စည်းများသုံးစွဲခြင်း 02ml တစ်ခုတည်းပြွန်, 8x02ml အတန်းပြွန်, 96-hole plate (အိမ်တွင်းပြွန်နှင့်သက်ဆိုင်သည်)
အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအကွာအဝေး4℃ ~ 99 ℃
အပူအမြန်နှုန်း5℃ / S (အမြင့်ဆုံး) 3.5 ℃ / S (Avg)
မြန်နှုန်းအေး5℃ / S (အမြင့်ဆုံး) 3.2 ℃ / S (Avg)
အပူချိန်ထိန်းချုပ်တိကျမှန်ကန်မှုကို ၀.၁ ℃
အပူချိန်တူညီမှု ± 0,25 ℃
အပူချိန်တိကျမှန်ကန်မှု ± 0.1 ℃
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အလင်းအရင်းအမြစ် အပြည့်အ ၀ လှိုင်းအလျားပြုပြင်ခြင်း - အခမဲ့ halogen tungsten lamp
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာလှိုင်းအလျားအကွာအဝေး 380nm ~ 780nm
စိတ်လှုပ်ရှားမှုလိုင်းအရေအတွက် ၅ (ချန်နယ် ၆ ခုသို့တိုးနိုင်သည်)
Detector -20 ℃ C ကို CD
ရှာဖွေတွေ့ရှိအလင်းလှိုင်းအလျားအကွာအဝေး 380nm ~ 780nm
ထောက်လှမ်းရေးလမ်းကြောင်းများနံပါတ် ၅ (ချန်နယ် ၆ ခုသို့တိုးနိုင်သည်)
သင့်လျော်သောဆိုးဆေးများနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေး FAM / SYBR အစိမ်းရောင် / LC အစိမ်းရောင် / ချောင်း၊ VIC / HEX / TET / Cy3 / Cy3.5 / JOE / Yellow555, ROX / Texas Red, Cy5 / Cy5.5
ယုံကြည်မှု ၉၉.၈% ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြင့်မိတ္တူ ၅၀၀၀ နှင့် ၁၀၀၀၀ ကိုထိထိရောက်ရောက်ခွဲခြားနိုင်သည်
ဆော့ဗ်ဝဲလုပ်ဆောင်ချက်များ Absolute quantification, ဆွေမျိုးအရေအတွက်, genotype, Amplification
အလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်း ၎င်းသည်အလိုအလျောက် workstation နှင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအလုပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်
linear အကွာအဝေး 10 ° -1010
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
ဒေတာကို output ကိုပုံစံ အသုံးပြုသူဆက်တင်များ
ရှေ့သို့ MA-688 Real-time PCR စနစ်
နောက်တစ်ခု: ပိုးမွှား AEROSOL နမူနာ
Model UF-150 Ultra-Fast Real-Time PCR စနစ်
MA-688 Real-time PCR စနစ်
ရှန်ဟိုင်း Chuangkun Bio သည်လူထုတစ်ခုလုံး၏ကျန်းမာရေးအတွက်စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုရှိစေရန်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အကျိုးရှိစေရန်မော်လီကျူးရောဂါရှာဖွေရေးနည်းပညာအသစ်များယူဆောင်လာမည်ဟုကတိပြုထားသည်။
လိပ်စာ: ရှန်ဟိုင်း၊ Baoshan ခရိုင်၊ အမှတ် ၈၀၂၊ အဆောက်အ ဦး ၁၊ အမှတ် ၆၉ Yuanfeng လမ်း၊ Baoshan ခရိုင်
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-21-60296318
CHKBiotech သည် detec ...
တုပ်ကွေးသို့မဟုတ် COVID-19? ကျွန်ုပ်တို့၏ Multiplex PCR ...
အသစ်သောပန်း ဦး ရစ်သရဖူကို nucleic acid ကို reagen ...